C-kpakpando - Shanghai International Trade Fair maka Ngwọta na nddị Ihe niile gbasara Retail, onye otu EuroShop Trade fighter ezinụlọ, toro ngwa ngwa kemgbe mmalite ya na 2015 wee bụrụ isi ihe na - emetụta ụlọ ọrụ mkpọsa na China niile. C-kpakpando 2020 bụ succ ...
Ntughari ohuru ohuru- RGB Dynamic Curtain LED Strip & RGB Dynamic LED Panel
site ha na 20-02-16
Anyị na-agbanye ụdị ngwaahịa abụọ ọ bụla - Dynamic Curtain RGB LED Strip & Dynamic RGB LED Module. Buildinglọ ọ bụla na-akọ akụkọ, ya mere n'ime ya. Mpempe akwụkwọ ọkụ ọkụ dị mfe iji wuo nke ọkụ ọkụ sitere na HYM Lighting nwere ike inyere gị aka ịkpụzi akụkọ ahụ. The modular imewe mak ...
Nke a bụ Couleur Lighting sonyere na EuroShop, mbipụta nke 2020 nke mpaghara ahịa azụmaahịa kachasị mkpa nyere Couleur Lighting iji gosipụta nzụlite ya na ọhụụ. Anyị chọrọ ikele onye ọ bụla bịara n'ụlọ ntu anyị na Euroshop na Düsseldo ...